पार्टी एकताले दलित मुक्तिको ढोका खोल्छ: डा निर्मल विश्वकर्मा - sunaulokhabar.com
Home अन्तर्वार्ता पार्टी एकताले दलित मुक्तिको ढोका खोल्छ: डा निर्मल विश्वकर्मा
पार्टी एकताले दलित मुक्तिको ढोका खोल्छ: डा निर्मल विश्वकर्मा
डा. निर्मल कूमार विश्वकर्मा
डा. निर्मल कूमार विश्वकर्मा दलित समूदायको एउटा बौद्धिक राजनैतिक व्यक्तित्व हूनूहून्छ। स्वीजरल्यान्डको ज्यूरिच विश्वविधालय र काठमान्डौ विश्वविद्यालयको सहकार्यमा विधावारिधी गर्नू भएका डा. बिश्वकर्मा विगत सात वर्ष देखि नेकपा एमाले केन्दिय विभागको सदस्यको रुपमा राजनैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै उहाले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, समृद्घि र दलित मूक्तिका सन्दर्भमा कलम चलाउदै आउनूभएको छ । उँहासँग नेपालमा अहिले भैरहेको वहसहरु र दलित आन्दोलनबारे सुनौलो खबरको लागि सहेक विश्वकर्माले गर्नूभएको कुराकानी :
अहिले दलित आन्दोलनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नू हून्छ ?
२०७२ साल असोजमा अहिलेको गणतान्त्रिक सँविधान निमार्ण पश्चात दलित आन्दोलनमा एक प्रकारको शिथिलता र एक प्रकारको स्थिरता आएको देखिन्छ। यद्पि यो सँविधानको विषयलाई लिएर दलित समूदायको मूक्तिको सवालमा यो समूदाय भित्रै दूई विपरीत धूवका वहस देखा परेका छन। एक धूवका वहस गर्नेहरुले यो सँविधान निमार्ण प्रकृयाले दलित समूदायको आन्दोलनले स्थापित गरेका जायज मूद्दाहरु अपहरण गरयो भन्ने तर्क गरिरहनूभएको छ ।
यस्तो वहस गर्नेहरुको तर्क अनूसार यो सविधानले यो समूदायको मूद्दाहरुलाई फेरी स्थापित गर्ने कार्यलाई सदियौ पछाडि धकेलेको छ । उनिहरुका अनूसार यो सँविधान अन्तिरिम सँविधानको अनूपातमा अत्यन्त पश्चगामी, प्रतिगमनकारी र वाधाकारी बनेको छ र यो सँसारमै नभएको डरलाग्दो शूस्त प्रतिगमनको परिणाम हो । यो विचार धारामा पनि दूइवटा तर्क देखिन्छन । नरमपन्थी विचार अनूसार विना रक्तपात शान्तिपुर्ण आन्दोलनबाट यसमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई सूधार गर्दै यो समूदायको पक्षमा लैजानू पर्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ। भने केहि वामपन्थी पार्टीहरु त्यसमा कृयाशील यो समूदायका नेतृत्वहरुले बल प्रयोग विना यो समूदायको मूक्ति हूदैन भन्ने तर्क गर्नू हून्छ । साथै उहाहरुले यो सविधानलाई स्वीकार पनि गर्नू हूदैन।
मेरो विचारमा पनि यो सविधानमा यो समूदायको मूक्तिको सन्दर्भमा केहि कमी कमजोरीहरु देखिन्छन। फेरी सँविधान समूल रुपले एकै पटकमा भरिपुर्ण हून पनि गाहो हून्छ । त्यसैले यसमा भएका कमिकमजोरी केलाउदै,त्यसलाई विश्लेष्ण गर्दै, वहस गर्दै शान्तिपुर्ण आन्दोलनबाट माध्यमबाट त्यसमा संसोधन गर्दै यो समूदायका पक्षमा लैजानू पर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ यसरी जादा दलित मुक्तिको लागी ढोका खोल्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो ।
जस्तै सँविधानमा समानूपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान रहेको छ । सविधान र अहिले बनेका ऐनहरुलाई हेर्दा यो एउटा आरक्षणको रुपमा स्थापीत भएको छ र आम बूभmाई पनि त्यस्तै रहेको छ । तर राज्यका सरकार,निजि क्षेत्र र नागरिक समाज सबै तह र सँरचनामा जातीय जनसख्याका अधारमा पुर्ण समानूपातिक प्रतिनिधित्वका लागि निरन्तर सर्घष गर्नू पर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तै अन्य थूर्पै सवालहरु रहेका छन जस्तै भुमी सूधारका सवाल,शासकीय स्वरुपको सवाल,समाजिक अन्र्तथूलनको सवाल आदि ।
सविधान परिर्वतनिय र जनताको माग अनुसार शसोधन गर्न सकिने जिवित दस्तावेज पनि हो अबको दलित आन्दोलनले यस्ता सवालहरुलाई समेटनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त यो सँविधानमा यो समुदायका सन्दर्भमा केहि रामा पावधानहरु पनि रहेका छन । जस्तै मौलिक हक अन्र्तगत दलित समुदायको छुटै हक समावेश भएको छ ।
केहि क्षेत्रमा आँशिक समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षा, एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान, यो समेदायको परम्परागत पेशाको आधुनिकिकरण गर्ने कुरा, दलित आयोगको व्यवस्था आदि। यी प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयन मात्र गर्न सकियो भने यो समुदायको केहि प्रतिशत घरको एक हद सम्म समृद्दिमा टेवा पुग्न सक्छ । तर दलित आन्दोलन शिथिल भयो भने यी पावधानहरु पनि कार्यन्यवन नहुन सक्छन । त्यसैले अबको दलित आन्दोलन सँविधान सापेक्ष ऐन बनाउन दबाव दिने,सोहि अनुसार निति तथा कार्यकम बनाउन लगाउने,बजेट छुटाउन प्रयास गरी सोहि अनुसार कार्यन्वयन गर्न सामुहिक पयास गर्न जरुरी छ।
हाम्रो देशमा भर्खर तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भयो, यसमा दलित समुदायको सहभागिता कस्तो देख्नु हुन्छ ?
यहि साल हाम्रो देशमा तीन स्तरका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । बैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानिय तहको निर्वाचन भयो भने मंसिरमा प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभामाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन गैरहेको छ ।
तीनै तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक रहेन । स्थानिय स्तरको निर्वाचनबाट जम्मा १३ जना प्रमुख र उपप्रमुख ( गाँउपालिका र नगरपालिका दुबैमा ) निर्वाचित भए । यो प्रतिशतका हिसाबले एक प्रतिशत पनि होइन । तर वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व शन्तोषजनक देखिन्छ । वडा सदस्यमा आरक्षणले गर्दा लगभग ७००० दलित दिदी बहिनीहरु वडा सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनु हुन्छ ।
यसै गरी प्रदेश र संघिय सभाको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधि मार्फत यो समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून रहयो । प्रतिनिधि सभामा जम्मा तीन जना र प्रदेश सभामा जम्मा चार जना मात्र यो समुदायबाट निवार्चित हुने अवस्था भयो । तर एउटा तथ्य चाँहि के हो भने प्रमुख राजनैतिक पार्टीले जति जनालाई यो समुदायबाट उम्मेदवारी दियो उहाँ सबैले विजय हासिल गर्नु भएको छ ।
अझ उहाँहरु सबैले भारी मतान्तरले विजय हासिल गर्नु भएको छ । यसले के देखाउँछ भने यो समुदायका उम्मेदवार पनि निर्वाचन जित्न सक्षम छन् । राजनैतिक पार्टी, गैरदलित नेतृत्व र आम जनतामा रहेको परम्परागत सोच जस्तै दलित उम्मेदवारलाई गैरदलितले मत दिंदैनन, यी उम्मेदवारले खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन, मास मोबिलाइज गर्न सक्दैनन भन्ने मान्यतालाई यसले गलत सावित गरिदिएको छ ।
तैपनि यो समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम भयो नि ?
हो, जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिशतका हिसाबले यो प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम हो । प्रतिनिधि सभामा हेर्दा १६५ जनामा जम्मा तीन जना मात्र यो समुदायबाट निर्वाचित हुनु भएको छ । यो प्रतिनिधित्व भनेको दुई प्रतिशत पनि होइन । यसै गरी प्रदेश सभामा ३३० जना सदस्यमा जम्मा ४ जना मात्र यो समुदायबाट निर्वाचित हुनुभएको छ । यो प्रतिनिधित्व लगभग एक प्रतिशत हो । जबकी नेपालमा यो समुदायको जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने पनि प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा २० जना र प्रदेश सभामा कम्तीमा ४० जना यो समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकेन ।
यसका पछाडि दुइ वटा कारणहरु रहेका छन् । एकातिर राजनैतिक पार्टीहरुमा परम्परागत सोँच र प्रकृया यद्यावधिक रहेको देखिन्छ । यो समुदायका उम्मेदवार उठाउँदा उनीहरुले जित्न सक्दैन जसले गर्दा तत तत पार्टीको जित्ने संख्या कम हुन जान्छ भन्ने सोच रहेको देखियो । जसले गर्दा राजनैतिक पार्टीहरुले यो समुदायको उम्मेदवार बनाउन नै कन्जुसाई गरे ।
उदारणको रुपमा देशको तत्कालिन सबै भन्दा ठूलो राजनैतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा एक जना उम्मेदवार पनि उठाउन चाहेन । त्यसैले अबको दलित आन्दोलनले राजनैतिक पार्टीहरुमा दबाब सृजना गर्न सक्ने, पार्टी नेतृत्वलाई कन्भीन्स गर्न सक्ने र वकालत गर्न सक्ने गरी यो परिपाटीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
अर्को तर्फ यो चुनावमा के पनि देखियो भने यो समुदायको नेतृत्वले प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवारी दावी गर्ने आँटमा पनि कमी रहयो । यसको प्रमुख कारण भनेको प्रत्यक्ष चुनावमा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापनमा हुने कठिनाई हो । अहिले प्रत्यक्ष चुनाव अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएको छ । सामान्य आर्थिक हैसियत भएका मानिसले चुनाव लड्ने शाहस नै गर्न नसक्ने वातावरण आयो ।
यो समुदाय आफु पनि गरिब र आफ्ना आफन्त नातेदारको हैसियत पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दा अत्यन्त गाह्रो हुन्छ । त्यसैले गर्दा यो समुदायका नेताहरु प्रत्यक्ष चुनाव लड्न भन्दा समानुपातिक प्रणालीबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने तिर लागेको देखियो । हैसियत भएको यो समुदायका नेताहरु शहरमा बसेको देखियो । जसले गर्दा उहाँहरुले आफ्नो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्न सक्ने वातावरण भएन । फिल्डमै बसेर काम गर्नु र शहरमा बस्नु फरक कुरा हुन । यसले पनि केही हद सम्म कठिनाइ सृजना गरेको देखिन्छ ।
त्यसो भने त यो समुदायले प्रत्यक्षबाट चुनाव जित्ने अवस्था नै आउँदैन क्या हो ?
होइन, निर्वाचन प्रकृया संधै यस्तो रहंदैन । जब सम्म जनमत पैसामा खरिद बिक्रि हुन्छ, जब सम्म भोट भोजमा साटिन्छ तब सम्म मात्र यस्तो हुने हो । भोट भनेको व्यक्तिको इज्जत हो , जनमत प्रदान गर्नु भनेको नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह र्गनु हो । जनचेतनाले यस्ता कुरालाई हटाउदै लग्ने छ । अहिले पनि कतिपय शहरी क्षेत्र, पहाडी निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्न पैसा नै चाहिन्छ भन्ने छैन ।
तर अहिले कै जस्तो रहयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दलित समुदायका लागि मात्र होइन सम्र्पूण गरिबको पहुंच बाहिर जाँदै गरेको देखिन्छ । अझ यो समुदायको अधिकांशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । त्यसमा थप राजनितिमा लागेका, एउटा राजनैतिक व्यक्तित्व बनाएका, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन हैसियत बनाएका यो समुदायका व्यक्तिको आर्थिक अवस्था त अत्यन्त कमजोर रहेको छ ।
अहिले कै अवस्थामा उनीहरु चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट विजयी हुन अत्यन्त मिहिनेत गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक निर्वाचन प्रणाली यस्ता वर्गको लागि लाभदाय हुन्छ । उदारहणको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाको प्रतिनिधित्वको सवाल पनि कमजोर रहेको छ । त्यसैले दलित समुदाय र महिलाको लागि उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा महिला महिला विच र दलित दलित विच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरिनु पर्दछ । यो प्रणाली रोटेशन अनुसार निश्चित काल खण्डको लागि हुनु पर्दछ ।
यसको अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रुपमा खारेज गरि पूर्ण समानुपातिक विर्नाचन प्रणाली यस्तो अवस्थामा दिगो हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने र सदस्यका हकमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउन सकिएमा यसले राजनैतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्दछ । अझ थप भन्ने हो भने निर्वाचन भनेको सबै समुदायको राज्यमा प्रतिनिधित्व हुने खालको हुनु पर्दछ ।
निश्चित समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यमा भैरहने र कुनै समुदाय संधै वहिष्करणमा परिरहने निर्वाचन प्रणाली स्थायी हुन सक्दैन । पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व बृद्धि गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । त्यसैले दलित समुदाय वा यस्तै वर्गको उम्मेदवारहरुलाई निश्चित आधार निर्माण गरि राज्यबाट अनुदान दिने व्यवस्था बनाउनु पर्दछ ।
प्रसंग फेरौं, अहिले पार्टी एकताको प्रकृया चलिरहेको छ, यो वाम एकताले दलित समुदायलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नु हुन्छ ?
पार्टी एकताका सन्दर्भमा दलित समुदायका विच दुई थरी प्रतिकृया देखा परेका छन् । एक थरीको भनाई के छ भने यो एकता भनेको विशुद्ध सामन्त बाहुनहरुको एकता हो । यो एकताले परम्परागत शासक वर्गको मात्र हित रक्षा र संरक्षण गर्ने हो । तर मेरो विचारमा वाम एकताले उत्पिडित समुदाय विशेष गरी दलित समुदायको मुक्तिलाई सहयोग गर्छ ।
वाम एकताका सन्दर्भमा दलित समुदायका विच दुई थरी प्रतिकृया देखा परेका छन् । एक थरीको भनाई के छ भने यो एकता भनेको विशुद्ध सामन्त बाहुनहरुको एकता हो । यो एकताले परम्परागत शासक वर्गको मात्र हित रक्षा र संरक्षण गर्ने हो । यसले उत्पिडित वर्गको हित रक्षा किमार्थ गर्दैन भन्ने तर्क अगाडि बढिरहेको छ । अझ उनीहरुको तर्क अनुसार यसले उत्पिडीत वर्ग समुदायलाई झन पाखा लगाउँछ भन्ने छ ।
यी वहसकर्ताहरुले यसलाई प्रमाणित गर्न अहिलेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा वाम गठबन्धनले यो समुदायको उम्मेदवारको चयन लाइ अगाडि सार्छन । वाम एकताको यत्रो ऐतिहासिक प्रकृया, सबै जनाले हौसला बढाएको बेला दलित समुदायको उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व स्वातै घटाइन्छ । पुराना अभिजात वर्गले आफ्नो भाग सुरक्षित गर्नको लागि दलित समुदायलाई पाखा लगाए भन्ने उनीहरुको आरोप छ ।
तर मेरो विचारमा वाम एकताले उत्पिडित समुदाय विशेष गरी दलित समुदायको मुक्तिलाई सहयोग गर्छ । हामी सबैले बुझेको र सुनेको तथ्य के हो भने दलित समुदायको मुक्ति कम्यूनिष्ट आन्दोलन, वर्ग संघर्ष वा युद्दबाट र कम्यूनिष्ट पार्टीबाट मात्र सम्भव छ । यो वाम एकताले गर्दा दलित मुक्तिको सन्दर्भमा साझा बुझाई हुन सक्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो वाम एकताले संविधानको अक्षरशः पालन र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । यसले बृहत रुपमा स्थायित्व, समृद्धि र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने छ । यसले संविधानमा भएका दलित समुदायका हक हितका प्रावधानहरु यदि कार्यन्वयन भए भने यो समुदायको उत्थानको लागि ठूलो टेवा पुग्दछ ।
यो समुदायलाई हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने, यो समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क अध्ययन गराउने, यो समुदायको भूमिहिन घरलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, यो समुदायका परमम्परागत पेशा औद्योगिकीकरण गर्ने जस्ता संविधानमा रहेका व्यवस्थाहरु यो समुदायका बिकाशका लागि महत्वपूर्ण रहेका छन् । यी प्रावधान अनुसार ऐनहरु निर्माण भए, त्यही अनुसार निति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण भएर कार्यन्वयन भए भने यसले यो समुदायको समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । यी प्रावधानहरु कार्यन्वयन गर्नको लागि वाम एकताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
वाम गठवन्धनले निर्वाचनको लागि निर्माण गरेको घोषणा पत्र अनुसार नेपाल यो शताब्दी अन्त सम्म सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने छ । १० वर्ष भित्र नेपालीको प्रति व्यक्ति आय ५ लाख पुग्ने छ । यसका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनता सो अवस्थाबाट मुक्त हुनेछैन । वाम एकताले गर्दा समृद्धिका लागि गरिएका यी वाचाहरु बाट व्यवहारिक रुपमै गरिब, दलित र सम्पूर्ण उत्पिदित समुदायले पाउनेछन् । यो समृद्धिले जातिय असमानता र विभेदलाई निर्मुल गर्न एउटा महत्वपूर्ण चरण पार गर्ने छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।
तै पनि वाम गठबन्धनले यो समुदायलाई पाखा लगाउने भन्ने बुझाई दलित समुदायमा बढ्दै गैरहेको छ नि ?
फेरी पनि दलित मुक्ति आन्दोलनलाई अहिलेका कम्यूनिष्ट पार्टीहरुले नै यो उचाई सम्म ल्याउन ठूलो मद्दत गरेको हुन् । यी कम्यूनिष्ट पार्टीहरु प्रति यो समुदायले अविश्वास गरिहाल्नु पर्ने अवस्था चाँहि आइसकेको देखिदैन । यिनै कम्यूनिष्ट पार्टीले गरेका संघर्ष र युद्धले गर्दा नै जातिमा आधारित सामन्तवाद गाँउ गाँउ सम्म जरै देखि हल्लिएको हो । नेपालको दलित आन्दोलन विषेश गरी कम्यूनिष्ट आन्दोलन संग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढिरहेको आन्दोलन हो । त्यसैले यो वाम एकताले गर्दा दिगो र छिटो सामाजिक परिवर्तन हुन मद्दत पुग्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।
नेपालमा अहिले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको वारेमा वहस पनि टडकारी रुपमै बढिरहेको छ । यस प्रति तपाईको धारणा के छ ?
मैले अगाडि छलफल गरे अनुसार वाम गठवन्धन समाजवादको पकिल्पनालाई साकार पार्न पनि अपरिहार्य छ । हाम्रो संविधानलाई समाजवाद उन्मुख संविधान भनिएको छ । समाजवादी सिद्धान्त व्यवहारतः लागु गर्न त्यति सजिलो छैन । चीन, रुस, युगोस्लाभिया, जस्ता देशहरुमा इतिहासमा रक्तपात समेत भएका छन् । हाम्रो देशको समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यन्वयन गर्न पनि वाम एकताको आवश्यकता रहन्छ ।
यो समाजवादी वहसले दलित समुदायलाई समेट्छ कि समेट्दैन ?
यदि समाजवादको मुल अवधारणा र रणनितिहरु वास्तविक रुपमै कार्यन्वयन भएमा यसबाट सबभन्दा बढि लामान्वित हुने वर्ग नै दलित समुदाय हो । दलित समुदायको मुक्ति समाजवादबाट मात्र सम्भव छ । समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको मुल मर्म भनेको नै उत्पादनशील श्रोतको पुर्नवितरण गर्नु हो । उत्पादनशील श्रोत भनेको जमिन हो, जमिनबाट कृषि उत्पादन हुन्छ ।
उत्पादनशील श्रोत भनेको पानी हो, पानीबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । उत्पादनशील श्रोत भनेको उद्योग धन्दा हुन, त्यसबाट विभिन्न प्रकाुरका सामाग्री उत्पादन हुन्छन् । त्यस्तो श्रोत भनेको प्रविधि हो त्यसबाट सेवा उत्पादन हुन्छ । यी उत्पादनका श्रोतहरुमा सदियौ देखि सामन्त दलाल पूँजीपति वर्गले कब्जा जमाउँदै आएका छन् । दलित समुदायले विभेद र अन्याय सहन वाध्य हुनुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको यहि राज्यको उत्पादनशील श्रोतबाट जवर्जस्ती बाहिर धकेलिनु हो ।
हो, समाजवादी कार्यक्रम भनेको यीनै उत्पादनको श्रोतहरु राष्ट्रियकरण गरिनु हो । वा प्रत्येक नागरिकको स्वामित्वमा रहने गरि पुनः वितरण गर्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा जमिनको पुनः वितरण गर्नु नै समाजवादको पहिलो खुडकिलो हो । यो जमिन राष्ट्रियकरण गरि कृषिबाट आफ्नो जिविका चलाउने दलित समुदायमा यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु नै समाजवाद कार्यन्वयनका पहिलो चरण हो ।
यसैगरी उद्योग धन्दा, पानीको श्रोत, प्रविधिमा सबै जनतालाई मालिक बनाउने अर्थव्यवस्था नै समाजवादी अर्थ व्यवस्था हो । उदाहरणको लागि एउटा उद्योग निर्माण लिउँ । सो उद्योगको मालिक कुनै एउटा पूँजिपति मालिक होइन कि सबै कामदार, कच्चा पदार्थ व्यवस्थापक त्यसको मालिक हुने प्रावधान नै समाजवाद हो । एउटा मालिक हुँदा एउटा पूँजिपति मात्र मोटाउँछ । सबै मालिक हुँदा त्यसबाट हुने आम्दानी आम जनतामा वितरण हुन्छ ।
समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको मुल मर्म भनेको नै उत्पादनशील श्रोतको पुर्नवितरण गर्नु हो । यी उत्पादनका श्रोतहरुमा सदियौ देखि सामन्त दलाल पूँजीपति वर्गले कब्जा जमाउँदै आएका छन् । दलित समुदायले विभेद र अन्याय सहन वाध्य हुनुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको यहि राज्यको उत्पादनशील श्रोतबाट जवर्जस्ती बाहिर धकेलिनु हो ।
तर नेपालमा यसरी ती उत्पादनका श्रोतहरु पुनः वितरण होला र ?
नेपालमा अहिले उत्पादनका श्रोतहरु होइन कि उत्पादन पुन वितरण गर्नु पर्दछ भन्ने वहस चलाएको पाइन्छ । यो समाजवादको मुल मर्म विपरितको वहस हो । अहिले चलेको वहसले भूमिसुधार होइन खाद्य वितरण गर्नु पर्छ, उद्योगमा कर लगाई त्यहाँबाट आउने रकमबाट लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जस्तै बृद्ध भत्ता, पोषण भत्ता कार्यक्रमम संचालन गर्नु पर्दछ भन्ने जस्ता छलफल भएको देखिन्छ ।
अझ भूमिसुधारका कुरा उठ्दा मात्र पनि भूमिपति र तिनले पालेका बुद्धिजिविहरुका कान ठाडा हुन्छन् । उनीहरुले सजिलो प्रकारले भूमिसुधार र भूमिको पुनः वितरण कार्यक्रम रोक्न भरपुर प्रयास गर्ने छन् । तर यसरी सामाजवाद आउँदैन । यसले गरिब र धनि बिचको खाडलको दुरी झन बढाउँछ । दलित र गैह्र दलित बिचको असमानता झन बृद्धि गर्दछ ।
यो र यस्ता वहसहरुलाई कमजोर बनाउन पनि वाम एकताको भूमिका रहन्छ । सच्चा कम्यूनिष्टले उत्पादन होइन, उत्पादनशील श्रोतको पुनःवितरणलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्दछ । नेपालको वाम एकताले पनि यहि प्रावधानलाई कार्यन्वयन गर्ने छ भन्ने विश्वास गरौं । अहिलेको उत्पादनको श्रोतहरुको संरचना जस्ताको तस्तै राखेर नेपालमा समृद्धि पनि आउँदैन र कसैको पनि मुक्ति हुँदैन ।
परम्परागत हिसाबले उत्पादनका श्रोतहरु जस्ताका तस्तै राखेर गरिने समृद्धि अपुरो हुन्छ । यसले वाम गठबन्धनले गरेको समृद्धिको सपनालाई खोक्रो बनाइदिन्छ । यसले वाम एकतालाई पनि दिगो र स्थायी बनाउँदैन ।
तपाईले माथि समृद्धि भन्ने शब्द थुप्रै ठाउँमा प्रयोग गर्नु भयो, अहिले नेपालमा समृद्धिको वहस पनि जोडतोडले सतहमा आएको छ । यो वहस प्रति तपाईको धारणा के रहेको छ ?
अहिले राजनैतिक र विकासको वहसमा समृद्धिको वहस जोडतोडले चलेकै छ । यो वहस अनुसार अब नेपालमा राजनैतिक व्रmान्ति समाप्त भएको छ । अबको विकासको मोडेल भनेको आर्थिक समृद्धि हो भन्ने तर्क जोडतोडले उठेको छ । यद्यपी यो वहस, यो तर्कका विपक्षमा केहि राजनैतिक पार्टी र बौद्धिक सर्कलको एउटा तप्का पनि रहेकै छन् ।
तर नेपालको अहिलेको गणतान्त्रिक संविधान समेतले समृद्धिलाई नै मुल मर्मको रुपमा राखेको छ । अहिले भर्खर सम्पन्न भएका तीन स्तरका निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनैतिक पार्टिले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र समेतले समृद्धिका मुद्दा, समृद्धिका परिकल्पना, समृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छन् । यसले के देखाउँछ भने अबका केहि दशक नेपालको राजनीति यसैको सेरोफेरो रहन्छ ।
तर यहाँ समृद्धिका कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन हुन बाँकी नै छ । समृद्धिका आधार के के हुने, समृद्धिका कार्यक्रम गबिमुखी हुने कि नहुने, समृद्धिले आर्थिक समृद्धि मात्र हेर्ने की बृहद समाजिक मानबिय समृद्धिलाई पनि समेट्ने जस्ता सवालहरुलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, त्यसका आधारमा मात्र यसबाट को लाभन्वीत हुने, को नहुने , कस्को समृद्धि हुने, कस्को नहुने, राष्ट्रको स्तर उठ्ने वा नउठ्ने भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ ।
मेरो विचारमा समृद्धि गरिबमुखी हुनु पर्दछ । अबको समृद्धिले गरिबको आर्थिक सामाजिक हैसियत बृद्धि गर्नु पर्दछ । यसको आधार भनेको मैले माथि निवेदन गरे अनुसार उत्पादनका श्रोतहरु पुनः वितरण गर्ने तर्फ हुनु पर्दछ । उदारहणको लागि नेपालको कृषि क्षेत्रको आद्योगिकरण र व्यवसायीककरण गर्ने कुरा समृद्धिको मूल प्राथमिकता हो भन्ने कुरा जताकतै वहसमा आएको देखिन्छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने कुरामा, सिंचाइको व्यवस्था गर्ने गतिविधि, उन्नत बिउ विजनको प्रयोग, बजार व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर यी क्षेत्रमा जति सुकै लगानी गरे पनि जसको जमिन छैन उसले यसबाट कसरी फाइदा पाउँछ ? नेपालमा लगभग २५ प्रतिशत घरधुरी भूमिहिन रहेका छन् । यी भूमिहिन घरधुरीले यस्तो व्यवसायीकरणबाट फाइदा उठाउँदैनन् । उनीहरुलाई राजगार दिने कुरा, उनीहरुलाई मजदुरी दिने कुराले उनीहरुको समृद्धि हुँदैन । भूमि सूधार भयो भने मात्र भूमिहिन गरिब, सिमान्त कृषकले फाइदा पाउँछन् । नत्र उनीहरु फेरी पनि पाखा लाग्ने छन् ।
मेरो विचारमा समृद्धि गरिबमुखी हुनु पर्दछ । अबको समृद्धिका कार्यक्रमले गरिबको आर्थिक सामाजिक हैसियत बृद्धि गर्नु पर्दछ । यसो नहूदा यसले समाजमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न पनि मद्दत गर्दैन ।
त्यसै गरी समृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्दा आर्थिक समृद्धिका मात्र कार्यक्रम संचालन गर्नु हुँदैन । यसका साथ साथै समाजिक र मानविय समृद्धिका कृयाकलापलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्दछ । मानिसलाई धनी बनाइयो तर दलित, महिला माथि हुने अन्याय र विभेद जस्ताको तस्तै रहयो भने त्यस्तो समृद्धिको अर्थ रहँदैन । यसले समाजमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न पनि मद्दत गर्दैन । त्यसैले सामाजिक पाटोलाई पनि समेट्नु पर्दछ । यसता कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ जसले सामाजिक अन्तरधुलन गरी आर्थिक समृद्धिको लाभ सबैले लिन सकुन ।
अन्तमा केहि भनाइहरु रहेका छन कि ?
दलित समुदाय यो राष्ट्रको एउटा ठूलो मुख्य सरोकारवाला हो । जनसंख्याका हिसाबले यो एउटा ठूलो समूह हो । सरकारी तथ्यांक अनुसार नै लिने हो भने पनि दलित समुदायको १४ प्रतिशत जनसंख्या भनेको सानो होइन । र नेपालको इतिहास र यो राष्ट्र निर्माणमा यो समुदायको भूमिका अन्य कुनै समुदाय भन्दा कम छैन । त्यसैले हामी कमजोर छौं र हौं भन्ने मानसिकता हामीले त्याग्नु पर्दछ । समग्र राष्ट्र र यो समुदायको हक हितका लागि आवश्यक पर्दा वलिदानी समेत दिन तयार रहनु पर्दछ ।